Amakamelo amahle amakamelo athule amagumbi angu-1-2 - I-Airbnb
Amakamelo amahle amakamelo athule amagumbi angu-1-2
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Fabienne
Koqeqeshwayo, i-tainee, i-aprendiz, iqembu lamagumbi angasese angu-1 ukuya kwangu-4 e-Clos eluhlaza futhi ethule yesihambeli esingu-1 kuya kwezingu-6 kufika ezinyangeni ezingu-6. Igumbi lokugezela lesimanje elineshawa namasinki angu-2 ukuze kusetshenziswe amanzi ngokonga, ingadi, ibhayisikili kanye nokupaka izimoto, ukuphepha. Eduze kwe-ULB, i-VUB, amahhovisi e-CEE, iMetro Demey, ithilamu, Ibhasi. I-Villa Zen, i-Organic neNdalo. Izindawo zokudlela eziningi, izimakethe ezinkulu kulula ukuzifinyelela ngezinyawo. Hamba noma ugijime endleleni eluhlaza, enhle kakhulu e-Rouge-Cloître nasehlathini lase-Soignes.
Igumbi lokulala 1 elinombhede omkhulu nombhede owodwa kanye nedeski labantu abangu-1 kuya kwabangu-3, ideski elincane.
Igumbi lokulala 2 elinombhede ongashadile ongu-1 noma 2 kanye nedeski elincane labantu abangu-1 kuye kwabangu-2.
Igumbi lokulala 3 elinombhede ophindwe kabili ongu-1 wabantu abangu-1 kuye kwabangu-2.
yokugezela, 2 osinki kanye eshaweni enkulu yesimanje ukwabelana.
I-WIFI yamahhala. Inhlanzeko nokuzola. Ukuthutha okulula nokusheshayo sibonga ku-Metro line 5, Ibhasi 34 noma ithilamu 94.7 ... Uzobingelelwa ngenjabulo. Kunengadi enhle. Ibhayisikili elizimele kanye nokupaka izimoto!
Amathuba okuhlalisa abantu abangu-1 kuye kwabangu-8 kuye ngokutholakala. Kunenja nekati endlini.
Ukuqashwa kwegumbi ngentengo ngokuya ngenani labantu. Ngiphendula ngokushesha emibuzweni yakho. Ukusetshenziswa kwekhishi kubavakashi besikhathi eside, futhi ubusuku obu-2 kuya ku-8 kungenzeka kuphela ukushisa kabusha kuhhavini noma ama-euro angu-10 ngaphezulu ngosuku. Itiye nekhofi kunikezwa ngaphandle kokudla.
ubusuku obungu-7 e- Brussels
4.54 out of 5 stars from 130 reviews
4.54 · 130 okushiwo abanye
Ikhona langempela lasemaphandleni edolobheni. Izindawo zokudlela ezinhle kakhulu ekugcineni komgwaqo, indawo enkulu yezitolo yaseCarrefour eduze kwemetro, ukuqashwa kwamabhayisikili okuqhele ngamamitha angama-200, indlela enkulu eluhlaza yokugijima, ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili. Futhi kubathandi bamahlathi neziphethu, iForêt de Soignes.
Ngivame ukuba khona endlini. Ngisemandleni akho ukwenza ukuhlala kwakho kube impumelelo. Ukuxhumana okuhle kwezidingo zakho kuyisiqinisekiso senhlalakahle yabo bonke. Ngiyi-lymphatic massage kanye ne-reflexology Therapist. Ngihola imidlinzo yesigubhu.
Ngivame ukuba khona endlini. Ngisemandleni akho ukwenza ukuhlala kwakho kube impumelelo. Ukuxhumana okuhle kwezidingo zakho kuyisiqinisekiso senhlalakahle yabo bonke. Ngiyi-lymphat…
Hlola ezinye izinketho ezise- Brussels namaphethelo